ကလိုစေးထူး: ဒါဟာ… အတင်းတဲ့လား…၊ အဲဒါ အတင်းတဲ့လား…
ပြောချင်၊ ရေးချင်နေတာတော့ ကြာပါပြီ။ မအားလပ်သေးတာရယ်၊ တခြားသော သရုပ်ဖော်စာတွေကို ရေးချင်စိတ်က ပိုများနေတာရယ်ကြောင့် ဒါကို မပြောဖြစ်ခဲ့သေးတာပါ။
တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဘက်နောက်ပိုင်း လတွေမှာ ကျနော်နဲ့ တကွ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ ဘလော့ဂါ အတော်များများကို မေတ္တာထားကြသူ ဟိုပုဂ္ဂိုလ်များက လက်သုံးစကားလေး တခုကို အပီအပြင်ကိုင်စွဲလို့ ဒေါသတွေ မထွက်ထွက်အောင်၊ စကားအရာအရ မနိုင် နိုင်အောင် ပြောဆို ပုတ်ခတ်တာတွေပါ။ ဘာတဲ့…၊ `အတင်းပြောနေပြန်ပြီ၊ အရည်မရ အဖတ်မရတွေ´ …တဲ့။
အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို သေသေချာချာ ဂရုစိုက် လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘလော့ဂ် နာမည်တွေကသာ ကွဲမယ်၊ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်သူ အာဏာပိုင်တွေကို သွယ်ဝိုက်လို့ တမျိုး၊ ဗြောင်ကျကျ တသွယ် ဖော်လံဖား အားပေးနေတာကတော့ တပုံစံတည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ဖော်လံဖား ဘလော့ဂ်တွေကို (သူတို့အချင်းချင်းက လွဲလို့) ဘယ်သူကမှ အသိအမှတ်ပြု အားမပေးကြတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်ဟာ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူတွေရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဆဲရေးခြင်း၊ မထိတထိ ရန်စခြင်း အစရှိတာတွေကို ဖန်တီးတော့တာပါပဲ။
သူတို့ ရန်စလိုက်လို့ တော်ရုံတန်ရုံ စိတ်သိပ်မထိန်းနိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ ဘလော့ဂါတယောက်ယောက်က ပြန်ပြောမိရင် သူတို့ကလည်း ထပ်ပြော၊ တဆင့်တဆင့်နဲ့ အပြန်အလှန် အကြီးအကျယ် ငြင်းခုန်ကြတဲ့ အဆင့်ကို မရောက်ရောက်အောင် ဖန်တီးယူတာကို သတိထားမိပါတယ်။ ဒီတော့ သာမန်အားဖြင့် `နိုင်ငံရေး´ ကို လေ့လာမြည်းစမ်းလိုသူ လူငယ်တွေရဲ့ အမြင်မှာ `နိုင်ငံရေး ဆိုတာကြီးက တဖက်နဲ့ တဖက် တိုက်ခိုက်အငြင်းပွား နေကြတာကြီးပါကွာ´ လို့ မြင်သွားစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ပါဟန် ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့က ကျနော်တို့ရဲ့ ရင်ထဲက ဆန္ဒတွေ၊ ဖြစ်စေချင်တာတွေကို စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း ချရေးလိုက်တယ်။ ရေးမိတာတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ်မှာ မှတ်ကျောက်အတင်ခံပြီး လာဖတ်သူတွေရှေ့ ဖြန့်ခင်းပြလိုက်တော့ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရသူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဝေမျှကြတယ်။ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက၊ အဲဒါကိုတောင်မှ မရှုစိမ့်နိုင်သူတွေပါ။ ဘာအကြောင်းပဲ ရေးလိုက် ရေးလိုက်၊ လက်ရှိ အာဏာပိုင်တွေကို ထိပါးလိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ အလွတ်ကျက်ထားသလို စာသားနဲ့ ပြန်တုံ့ပြန်ပါတော့တယ်။ `အတင်းပြောနေတယ်´ တဲ့…။
ကဲ…၊ ဟုတ်ပြီ။ ကျနော်တို့ကို `အတင်းပြောနေပါတယ်´ လို့ စွပ်စွဲနေသူတွေကို ကျနော် မေးခွန်း ပြန်ထုတ်ချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသူတွေက မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်သလို၊ ကျနော်တို့ကလည်း မြန်မာလူမျိုးပါပဲ။ မြန်မာလူမျိုးချင်း နားလည်တဲ့ မြန်မာဘာသာစကားကို အသုံးပြုပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ကနေ မည်သူမဆို ဖတ်လို့ရနိုင်အောင် တင်ထားပြီးတော့ မိမိဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်တာဟာ အတင်းပြောတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါသလား။ အတင်းပြောတယ် ဆိုတာရဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ် ဆိုလိုရင်းကိုရော လေ့လာမိကြပါရဲ့လား။
လွတ်လပ်တဲ့ သတင်းအင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ကိုယ်ထုတ်ဖော်တာဟာ တကယ်တော့ `အတင်း´ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်တကယ်တမ်း အာဏာပိုင်တွေက စဉ်းစားဉာဏ်ရှိရှိနဲ့၊ အဓိဌာန်ကျကျ သုံးသပ်တတ်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သူတို့အပေါ် ပြည်သူတွေက ထားရှိတဲ့ တကယ့်ဆန္ဒအစစ်အမှန်ပါ။ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ဖိနှိပ်ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ အတွက် ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေက မပြောသာ၊ မပြောရဲတာဟာ သူတို့အပေါ် ထားရှိတဲ့ တကယ့်သဘောထား အစစ်အမှန်လို့ ထင်မြင်နေတာကိုက စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းနေတာပါ။ တကယ်တမ်းသာ ကျနော်တို့ ပြောနေသမျှဟာ `အတင်းစကား´ ဆိုတာ သေချာပေါက် ယုံကြည်သပ ဆိုရင် ဘာကြောင့်များ ကျနော်တို့ရဲ့ ရေးသားချက်တွေကို ပြည်သူတွေက ဖတ်ခွင့်မရအောင် ပိတ်ပင်နေရပါသလဲ။ အတင်းစကားပဲ၊ ဘာများ ဂရုစိုက်စရာ လိုနေပါသေးလဲ။ `အတင်းစကား´ ကိုမှ ယုံကြည်နေလောက်အောင် ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ စဉ်းစားဉာဏ် မဲ့နေတယ်လို့တော့ ကျနော်မထင်ပါ။
ကျနော်တို့ကို `အတင်းပြောနေပါတယ်´ လို့ ပုတ်ခတ် စွပ်စွဲနေသူတွေရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို လေ့လာကြည့်တော့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ မကောင်းကြောင်း၊ အဲဒီနိုင်ငံတွေက ရဲတွေက ဘယ်လိုဆိုးတာ၊ အဲဒီနိုင်ငံ စစ်တပ်ကတော့ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း မကောင်းတာ၊ အစရှိတာတွေကို ကပ်ကပ်သပ်သပ် စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် ရေးထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကဲ၊ သူတို့ အဲဒီလို ရေးနေတာတွေကို အဲဒီနိုင်ငံကြီးတွေက သိပါလေစ။ သိဖို့ နေနေသာသာ ဟိုက ဖုတ်လေတဲ့ ငပိ ရှိတယ်လို့တောင် ထင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သိစရာ အကြောင်းလဲ မရှိပါဘူး။ မြန်မာလိုရေးထားတာတွေကိုး…။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ရေးနေတာတွေကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သူ အာဏာပိုင် လူကြီးမင်းများက သိပါတယ်။ သိလို့လဲ Blogger.com ဆိုတာကြီးကို ပိတ်ပင်ထားတာပါ။ သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သတင်းမီဒီယာ မှန်သမျှကိုလည်း ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့ လိုက်ပိတ်နေတာပါ။ ကဲ…၊ ဒါဖြင့် တကယ်တမ်း အတင်းပြောနေသူတွေက ဘယ်သူတွေ ဖြစ်နိုင်ပါမလဲ။
ဒါပေမယ့် `အတင်းပြောတယ်´ ဆိုတဲ့ စကားကတော့ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ မြန်မာဘလော့ဂါတွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ အကောင်းဆုံး စကားလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ဒီစကားဟာ အရပ်ထဲမှာ အရပ်သား အချင်းချင်း ပြောရင်တောင် သိပ်စိတ်ဆိုးချင်စရာကိုး။ ပြီးတော့ အချက်အလက်အရ၊ အကြောင်းအရာအရ သေသေချာချာ ဃဃနနလည်း ပြန်လည် ချေပနေစရာ သိပ်မလိုလှဘဲနဲ့ စာရေးသူကို ဒေါသထွက်လာအောင် ဆွနိုင်တဲ့ နည်းဆိုတော့ ဘာကိုပဲ ရေးရေး၊ `အတင်းပြောနေပြီ´ လို့ ပုတ်ခတ်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက်က ဘလော့ဂ်ရေးဖော် မောင်နှမတချို့နဲ့ စကားစမြည်ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စကားပြောရင်းနဲ့ ဘာကို သတိထားမိသလဲဆိုတော့ သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ထဲက ဆန္ဒတွေကို လှမ်းမြင်ယောင် လာမိတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေရဲ့ အဲဒီဆန္ဒတွေကို သူတို့ဘလော့ဂ်မှာ အကုန်အစင် သူတို့ ချမရေးကြဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။ အထက်က ကျနော်တင်ပြခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ စနက်ကြောင့်ပါပဲ။ ဒီလိုလူတွေနဲ့ ဖက်ပြိုင်ပြီးတော့လည်း ရန်မဖြစ်ချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လာပြောရင်လဲ မခံချင်စိတ်နဲ့ ပြန်ပြောမိတော့ ကိုယ့်မှာပဲ ဒေါသထွက်ရမယ်။ မရေးတာပဲ ကောင်းပါတယ်လို့ တွေးကြဟန် များလာတယ် လို့ ထင်မိပါတယ်။
မိန်းကလေးဆိုရင်လည်း မိန်းကလေး အလျှောက် နှမသားချင်း စာနာစိတ်လေးတောင် မထား ပုတ်ခတ် တိုက်ခိုက် ဆဲရေးပစ်ဖို့ ၀န်မလေးကြတဲ့ အဲဒီလူတွေရဲ့ စနက်ဟာ `လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်´ ကို စနစ်ကျကျ သွယ်ဝိုက် ထိပါးနေသလိုပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဆက်ရေးစရာရှိတာကတော့ ရေးရအုံးမှာပါပဲ။ အခုရော…၊ `အတင်းပြောနေပြန်ပြီ´ လို့ လာပုတ်ခတ်ချင်သူ ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့လဲ ဘာဖြစ်သေးလဲ။ ခပ်ပြုံးပြုံးပေါ့။ အဓိကကတော့ ကိုယ်လျှောက်တဲ့ လမ်းကို ကိုယ်တကယ် ယုံဖို့ပါပဲခင်ဗျာ။
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:15 PM
please carry on bro!
Jan 30, 2008, 11:36:00 AM
Jan 30, 2008, 3:00:00 PM
Jan 30, 2008, 3:02:00 PM
လုပ်တတ် သမျှလေး တော့ လုပ်ခွင့် ပေးထားလိုက်ပါဗျာ။
ဥာဏ်ရည် ကိုယ်သွေး ညံ့ရှာကြတဲ့ သွပ်ချောင်ပေါလေး တွေကို။
Thank You ! Keep on track !
Jan 31, 2008, 4:23:00 AM
The important thing for us is that we could not afford to lose time arguing with them. Some of them who built and blogs those suckerer's blog may not be young cadets or entry level officers in Russia as they claimed. More likely they might be bums, unemployed good for nothing folks conscripted or lured into Kyant Phote (Union Solidatory Deve. Ass.) or they may be some college drop outs recruited into ranks of internet police. For them, swearing and mindless arguing is what they are paid for. Mean while, for us, we are blogging, visiting blogs and Burmese sites and engage in debates and discussions because we still care for Burma and Burmese people. We can choose to live where we are now, we can live and work here, rise up to where we are destined and belong. So young bloggers should not waste your time countering their provocative remarks. If we are working full time, earn an extra advancement degree or certificate, attendaskill training. If we are studying, earn good grades and prepare for employment. That is what I think of the issue battle of words with Nga Kyant bums.
Feb 2, 2008, 4:01:00 AM
အခုလို ရေးခွင့်ပေးရဲတဲ့၊ ဝေဖန်ခံနိုင်တဲ့ အကို့ ကို လေးစားပါတယ်
အခုထက်ပိုပြီး ခံနိုင်ရည် ရှိပါစေ
ကျနော် ကတော့ ဝေဖန်ဖို့ အဲလောက်မပြည့်ဝပါဘူး
မတူကွဲပြားခြားနားတဲ့ ခံယူချက်တွေကို ခြားခြားနားနား နားလည်ဖို့ လေ့လာနေဆဲပါ...
Aug 13, 2008, 8:52:00 AM